POLY-GCL, oo Caydhowday – Rasaasa News
POLY-GCL, oo Caydhowday
April 27, 2016 – Shirkada Shiinaha POLY-GCL, oo muddo qodaysay ceelasha shidaalka Jeexdin iyo Elale oo shaqaalaheedii si lama filaana kala baxday Ogadenia.
Sida ay daabacday Jariirada afka dheer ee African Intelligence, POLY-GCL, waxaa ku dhacday lacag la,aan, waxayna si kadis ah u joojisay hawlihii ay gabalka ka waday, waxaa kale oo ay la baxday shaqaalhii ka joogay Atoobiya.
POLY-GCL, mudo sideed bilood ah, waxay ka qoday Elale labo ceel, meesha kolkii hore qorshuhu ahaa in ay qodo afar ceel.
Jeexdin, muddo lix iyo toban bilood ah waxay qoday afar ceel, meesha uu qorshuhu ahaa 11 ceel.
Ceelasha ay qoday POLY-GCL, waxay sheegtay in ay ka qabto rajo xoog leh oo ka badan tii hore looga qabay. POLY, waxay suuqgayn ugu jirtaa shidaadlka Jeexdin iyo Elale, sidii ay ugu heli lahayd lacag ay hawsha ku wado waa sida ay sheegtay.
Ceelasha qabyada ah ee ay POLY-GCL, ka tagtay waxaa waardiye ka haya ciidamada federalka ah ee Atoobiya.
POLY-GCL, waxay af dhabaandho, sheegtay horaantii bisha Aprril in ay gogli doonto tuubooyinka shidaalka ee isku xidhay dalka Jabuuti, Jeexdin iyo Elale, iyada oo bilaabi doonta wax soo saarka sida ay sheegtay bilowga 2019. Hore masuuliyiinta dawlada Atoobiya ugu saraysa iyo shirkadani waxay wada jir u sheegeen in dhoofinta shidaalka Ogaden uu bilaaban doono 2017.
Suuurto galinimada arintaasi waa mid ka fog xaqiiqada ka jirta gabalka Ogaden, iyada oo ayna jirin xidhiidh u dhaxeeya dadwaynaha gabalka Ogaden iyo POLY-GCL-Atoobiya iyo baladhka iyo qardaha dhulka shidaalka la rabo in la mariyo.